Nzira Itsva Yekuyera Mafambiro Ekufamba muVana Vane Autism |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Nzira Itsva Yekuyera Mafambiro Ekufamba muVana Vane Autism
Kutevedzera mota, kana kugona kutevedzera hunhu hwevamwe, chikamu chakakosha chekuziva uye budiriro yemagariro kubva paudiki. Nekudaro, zvidzidzo zvakaratidza kuti kutevedzera mota kunogona kusiyana muvana vane autism spectrum disorder (ASD), uye matanho akavimbika ehunyanzvi uhwu hwakakosha saka saka anogona kubatsira kupa kuongororwa kwekutanga uye kupindira kwakanangana.
Iye zvino, vaongorori veCentre for Autism Research (CAR) paChipatara chevana chePhiladelphia (CHOP) vakagadzira nzira nyowani yekuyera mota yekutevedzera, vachiwedzera kune yakakura seti yemakomputa maitiro ekuongorora maturusi anogona kuona uye kuratidza misiyano yemotokari muvana vane autism. Chidzidzo chinotsanangura nzira ichangobva kuratidzwa sechikamu cheMusangano Wepasi Pose weMultimodal Interaction.
Vatsvagiri vanga vachifarira kutevedzera mota senzira yekudzidza autism kwemakumi emakore. Kutevedzera kwakakosha mukukura kwekutanga, uye misiyano yekutevedzera inogona kuve hwaro mukuti misiyano yemagariro mune avo vane autism inozviratidza sei. Nekudaro, kugadzira matanho ekutevedzera ari ese ari maviri granular uye scalable kwakaratidza kunetsa. Munguva yakapfuura, vaongorori vaivimba nematanho emushumo wevabereki ezvimwe zviitiko zvekutevedzera, asi izvi hazvisi izvo chaizvo zvakakwana kuyera misiyano yemunhu kana shanduko nekufamba kwenguva. Vamwe vakashandisa maitiro ekukodhesa hurongwa kana mabasa akasarudzika nemidziyo kutora hunyanzvi hwekutevedzera, hune simba rekushandisa uye husingawanikwi neruzhinji rwevanhu.
"Kazhinji kazhinji, kusimbiswa kunoiswa pakuguma kwenyika kururamisa kwechiito chakatevedzwa, kutadza kuzvidavirira pamatanho ese anodiwa kuti asvike ipapo," akadaro Casey Zampella, PhD, musayendisiti kuCAR uye munyori wekutanga wekudzidza. “Zviito zvinogona kunzi ndezvechokwadi zvichibva pakuti mwana anogumira papi, asi iko kutadza kuziva mafambiro ekuti mwana akasvika papi. Mafambiro anoita chiitiko dzimwe nguva akakosha pakuratidza misiyano yemota pane kuti inopera sei. Asi kubata uku kuri kuitika kunoda nzira yakanaka uye ine mativi mazhinji. "
Kuti zvigadzirise izvi, masayendisiti kuCAR akagadzira nzira itsva, yakawanda otomatiki yekuongorora kutevedzera mota. Vatori vechikamu vanorairwa kutevedzera kutevedzana kwekufamba munguva nevhidhiyo. Iyo nzira inoteedzera kufamba kwemuviri pamajoini ese emakumbo pamusoro penguva yakazara yebasa rekutevedzera nezvose zviri zviviri 2D uye 3D kamera. Iyo nzira inoshandisawo nzira nyowani inobata kana mubati ane matambudziko ekubatanidza mota mukati memuviri wake izvo zvinogona kukanganisa kugona kwavo kuronga mafambiro nevamwe. Kuita kunopimwa pamabasa akadzokororwa.
Vachishandisa nzira iyi, vatsvakurudzi vakakwanisa kusiyanisa vatori vechikamu vane autism kubva kune vanowanzoita vechidiki vane 82% yakarurama. Vatsvagiri vakaratidzawo kuti misiyano yaifambiswa kwete chete nekudyidzana kwevanhu nevhidhiyo asiwo nekubatana kwevanhu. Ese ari maviri 2D uye 3D yekutevera software aive nechiyero chakafanana chechokwadi, zvinoreva kuti vana vanogona kuita bvunzo kumba vasina kushandisa chero midziyo yakakosha.
“Miyedzo yakaita seiyi haingobatsiri kuti tidzidze zvakawanda pamusoro pekusiyana kwevanhu vane autism, asi inogona kutibatsira kuyera mhedzisiro, sekushanda kwekurapa kana shanduko muhupenyu hwavo,” akadaro Birkan Tunç, PhD, nyanzvi yesainzi kuCAR. uye munyori wezvidzidzo zvepamusoro. "Kana bvunzo iyi yawedzerwa nemamwe akawanda ekuongorora maitiro ekuongorora ari kugadzirwa izvozvi, tave kusvika padanho rekuti tinogona kuyera maitiro mazhinji anocherechedzwa nana chiremba."
chipatara Philadelphia tsvakurudzo Software